ClockFirst: ny famantaranandro dia eo amin'ny efijery hidin-trano (Cydia) | Vaovao IPhone
ClockFirst: ny famantaranandro dia eo amin'ny efijery hidin-trano hatrany (Cydia)
Ho an'ny maro, tena ilaina ny fotoana, mifindra isan'andro miaraka amin'ny fivoriana, fanendrena, kaonseritra, asa ... Izany no antony maha-zava-dehibe azy ireo ny fotoana, tsy maintsy fantany ny ora marina. Rehefa mihaino mozika amin'ny iPad na iPhone isika ary manidy ny efijery, rehefa manindry ny bokotra an-trano isika (mba hahitana ny efijery fanidiana) dia hitantsika ny fanaraha-maso playback, fa ho an'ny maro dia mety tsy maninona izany. Miaraka amin'ny ClockFirst, tweak avy any Cydia, dia hanana ny famantaranandro voalohany aseho foana eo amin'ny efijery hidin-trano.
Hanana fotoana eo amin'ny efijery hidin-trano miaraka amin'ny ClockFirst foana isika
ClockFirst, ilay tweak resahintsika dia ao amin'ny repository BigBoss toy ny maimaim-poana, Ka raha mahaliana anao ny manana ny famataranandro eo amin'ny efijery hidin-trano foana, safidy mety io.
Aorian'ny famoahana indray izay manery antsika hanao Cydia, Nanisy fizarana fanaingoana ClockFirst ao anatin'ny Fikirakira iOS; saingy tsy ho afaka hikirakira na inona na inona izahay satria telo ihany ny bokotra: ny iray hampiasana, ny iray hanome amin'ny alàlan'ny PayPal ary ny iray hafa hanome ho an'ny mpandrindra miaraka amin'ny Bitcoins.
Mba hijerena aloha ny vokatra ateraky ny ClockFirst dia esory ny tweak avy amin'ny iOS Settings; apetaho ny mozika ary hidio ny terminal. Ampidiro ny efijery hidin-trano ary ho hitanao fa hiseho aloha ireo toe-javatra filalaovana.
Manaraka, ampandehano ny ClockFirst ary amin'ny fomba mitovy, ampandehanana ny mozika ary ho hitanao fa ny ora amin'ny faritaninao dia hiseho aloha, ary avy eo (aorian'ny 2 segondra) eo ambanin'ny fotoana, ny daty; Raha tsindrio ny bokotra Home, dia hiditra amin'ny fikirana amin'ny playback isika.
Tsy misy fialan-tsiny izao raha milaza fa tara loatra ... raha toa ka tonga aminao io olana io izay tsy dia henoko loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » ClockFirst: ny famantaranandro dia eo amin'ny efijery hidin-trano hatrany (Cydia)
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fividianana fampiharana
Game of Thrones Ascent dia ho an'ny iPhone ary maimaim-poana